दीर्घायु हुन मन छ भने… « Jana Aastha News Online
दीर्घायु हुन मन छ भने…
प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७७, मंगलवार २०:२४
आजभोलि क्यान्सर र अरू गम्भीर रोगका बिरामी र मृत्युका घटना निकै बढिरहेका छन् । समुदायमा स्वास्थ्य चेतना अझै राम्रो आइसकेको छैन । मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारा रोग लागिसकेपछि उसले र परिवारले कस्ताकस्ता दुख र आपत भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीले मात्र जान्दछन् । नपरी कसैले चेत्दैन, परे पछि उम्किंदैन ! यही हो दुर्भाग्य र यस्तै हुँदै आइरहेको छ ! हाम्रो आफ्नै गल्तीले नै यस्तो भइरहेको त छैन ? सबैले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
शहर बजारमा पहिलेदेखि नै पोलिथिन र प्लास्टिकलाई घरको छेउमा ल्याएर बाल्ने गरेको पाइन्छ । एउटा दुईवटा घरको नभएर यो सबैजसो घरधुरीको उहिले देखिकै चलन हो । यसरी बाल्दा हामीले फोहोर हटाएको र सरसफाइँ गरेको भन्ने ठानिराखेका हुन्छौं । बुढापाका मात्र नभएर पढेलेखेका मान्छेहरू समेत यसबारे त्यति सचेत र जानकार देखिन्नन् । अझ जाडो मौसममा त हाम्रा बालबच्चाहरू समेत त्यसरी बालिएको आगो तापेर पनि बस्ने गरेका भेटिन्छन् । हाम्रो ठूलो गल्ती यही नै हो । १/२ पटक नगर/गाउँ पालिकाको सहकार्यमा जागरूक युवाहरूले पोलिथिन प्रयोग विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम चलाए पनि त्यस्ता कार्यक्रम दिगो बनेनन् र अझ पोलिथिन/प्लास्टिक बाल्नु डरलाग्दो रुपले हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरो समाजलाई सायद पुग्नेगरी सिकाइएकै पनि छैन । तर अब यो बारे चेतना फैलाउन ढिलो गरिनु हुँदैन ।
प्लास्टिक बाल्दा के हुन्छ, थाह छ ? प्लास्टिकको धूवाँमा डाइ-अक्सिन, फ्युर्‍यान, मर्क्युरी, बाइफिनाइल्स र पोलिस्टाइरीन लगायतका अरू पनि अनेक डरलाग्दा ग्यास र रसायनहरू निस्किन्छन् । यिनीहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा खतरनाक तात्कालिन र दीर्घकालिन नोक्सानी गर्छन् । कुनैले तुरुन्तै मृत्यु समेत गराउन सक्छन् भने दीर्घकालिन रुपमा शरीरमा क्यान्सर ल्याउने, स्नायु प्रणालीमा क्षति गर्ने, स्वासप्रस्वासका रोग जन्माइदिने र थाइरोइड ग्रन्थीलाई असन्तुलित बनाइदिन सक्छन् । यिनीहरूले अरू पनि थुप्रो स्वास्थ्य समस्या जन्माउन सक्छन् जसको सूची लामो छ । हाम्रो शरीरलाई सोझै प्रभाव पार्ने कुरो त छँदैछ यी रसायन हाम्रा तरकारी, सागसब्जी, फलफूल र अन्नबालीमा पुगेर घुमाउरो तरीकाले पनि फेरि हामीलाई नै नोक्सान गर्न आइपुग्छन् । यसरी प्लास्टिक बालेर हामीले आफै र वरपरका अरू धेरैलाई जानेर नजानेर जोखिममा पारेका छौं । यही एउटै कुराबाट हामीले धेरै समस्या आफै निम्त्याइरहेका हुन्छौं र यसो गर्न बन्द गर्दा मात्रै पनि हामी धेरै डरलाग्दा रोगबाट वच्न सक्छौं । त्यसैगरी किचनमा प्लास्टिकका भाँडा बर्तनमा तातो खानेपिउने कुरा सर्भ गर्दा त्यसबाट डाइ-अक्सिन, बाइफिनाइल-ए र थालेट्स जस्ता हानिकारक रसायन पग्लिएर खानासंग हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन् । यी रसायनहरूले हामीमा कलेजो र थाइरोइडका रोग देखि लिएर बाँझोपन, हाइ कलेस्टरोल र उच्च रक्तचाप जस्ता तमाम समस्या ल्याइदिन सक्छन् । माथिका उल्लेखित रसायनहरू सबै डरलाग्दा क्यान्सरकारक हुन् भन्ने कुरा थुप्रै वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रष्ट भइसकेको छ । तसर्थ हामीकहाँ विभिन्न अंगमा हुने क्यान्सरका रोगको एउटा ठूलो कारण हामीले प्रयोग गर्ने र बाल्ने पोलिथिन र प्लास्टिक हुन सक्ने देखिन्छ ।
हामीले चाहेको पनि आफू, आफ्नो परिवार र समाजका सबै मान्छेको स्वास्थ्य र आरोग्य नै त हो । के हामी रोगी भएर दुख पाउन चाहन्छौं ? अवश्य चाहन्नौं । त्यसोभए घर छेउमा ल्याएर वा अन्यत्र पनि पोलिथिन, प्लास्टिक र रबर बाल्न र प्लास्टिकका सामान प्रयोग गर्न बन्द गरौं र अरूलाई पनि यही कुरो सिकाऔं । हाम्रो गाउँ ठाउँमा जसले गरेपनि असर हामी सबैलाई गरिराखेको हुन्छ । फेरि यो कुनै गर्नै नसक्ने गाह्रो काम पनि त छैन ! पोलिथिनका झोला, पोलिथिन वा प्लास्टिकका प्याकेटमा आउने खानेकुराहरू नकिनौं । प्लास्टिकका भाँडा बर्तन प्रयोग नै नगरौं र प्रयोग नै नगरेपछि बाल्नु पर्ने अवस्था पैदा हुनेछैन । यसो गर्दा हामी पनि बच्छौं, वातावरण पनि प्रदुषित हुन पाउँदैन । भोलि पछुताउनु भन्दा आजै सचेत हुनु बुद्धिमानी हैन र ? के हामी यति गर्न सक्दैनौं ?